Maxamuud Axmed Muuse | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waxaa waayadaan dambe soo ifbaxay xanuunka aadka ufaafay ee shanta qaaradood adduunka albaabada uxidhay. Waa fayraska saameeyay malaayiin dad ah oo ku nool caalamka, kuwaasi o noloshooda go’doon geliyay. Fayrsankaan oo soo shaac baxay 2019-kii, dabayaaqadiisii ayaa galaaftay malaayin dad ah, wuxuuna xiriray isku socodkii adduunka, waxaa istaagay ganacsigii, waxaa khatar gashay bilyan dad ah oo caalamka ku nool. Marabo in aan ka sii hadlo corona iyo wuxuu yahay, waxaa ka hadlay dad badan oo caalamka ku nool, si cilmiyaysana uga hadlay. Waxaan rabaa in aan ka faaloodo xanuunka loo yaqaan COVID19 iyo noolaha Hinjibiso farqiga ka dhexeeya, astaanta ay …
Haweenka iyo Guriga
Haweenku waa furaha bulshada, waana wax soo saarka dabiiciga ah ee Alle ugu galadaystay adoomihiisa. Waxaa ii muuqatay inay tahay halka ay haweenayda muslimada ah ama Soomaaliyeed ay ka bilaabi karto horumarinta bulshadeena waana boos muhima. Soomalidu waxay ku maah-maahdaa “ Haani gun bay katolontaa” Ujeedkayga waxaan aaminsanahay horumarinta bulsho inay ka bilaabanto horumarin qoyseed, sababtoo ah bulshadu waa qoysas isu tagay, haddii aanay gabadha muslimada ahi u istaagin horumarinta iyo wax ka beddal ay kusamayso qoyskeeda, awood uma yeelanayso wax ka beddal iyo horumarin bulsheed, mana buuxinayso kaalinkii ay ku lahayd bulshadeeda. Waxaa iswaydiin mudan siday haweenaydu uhorumarinkartaa qoyskeeda? …
Noolaha Alle uumay waxay leeyihiin dhiig, haddana kala duwan dhiigooda. Waxaa jira afar dhiig oo caalamka laga aqoonsan yahay in uu jiro, waxayna kala yihiin: A, B, O, and AB. Waxaa jira kuwa ka fircama afartaas qeybood ee dhiiggu ka kooban yahay. Waxyaalaha aan ka hadlayno ma ahan in 100% sax yihiin balse waa cilmibaaris la sameeyay, laguna sameeyay dad badan oo caalamka ku nool. Waana mid shakhsi walba ufuran in uu ku sameeyo baaritaan. Waxaan soo qaadanaynaa astaamaha lagu garto qofka leh dhiigga AB, wuxuu ku wanaagsanyahay, waxyaalaha uu ku xunyahay, cunada nooca ku haboon, xanuunada uu unugul yahay, …
Noolaha Alle uumay waxay leeyihiin dhiig, haddana kala duwan dhiigooda. Waxaa jira afar dhiig oo caalamka laga aqoonsan yahay in uu jiro, waxayna kala yihiin: A, B, O, and AB. Waxaa jira kuwa ka fircama afartaas qeybood ee dhiiggu ka kooban yahay. Waxyaalaha aan ka hadlayno ma ahan in 100% sax yihiin balse waa cilmibaaris la sameeyay, laguna sameeyay dad badan oo caalamka ku nool. Waana mid shakhsi walba ufuran in uu ku sameeyo baaritaan. Waxaan soo qaadanaynaa astaamaha lagu garto qofka leh dhiigga O, wuxuu ku wanaagsanyahay, waxyaalaha uu ku xunyahay, cunada nooca ku haboon, xanuunada uu unugul yahay, …
Noolaha Alle uumay waxay leeyihiin dhiig, haddana kala duwan dhiigooda. Waxaa jira afar dhiig oo caalamka laga aqoonsan yahay in uu jiro, waxayna kala yihiin: A, B, O, and AB. Waxaa jira kuwa ka fircama afartaas qeybood ee dhiiggu ka kooban yahay. Waxyaalaha aan ka hadlayno ma ahan in 100% sax yihiin balse waa cilmibaaris la sameeyay, laguna sameeyay dad badan oo caalamka ku nool. Waana mid shakhsi walba ufuran in uu ku sameeyo baaritaan. Waxaan soo qaadanaynaa astaamaha lagu garto qofka leh dhiigga B, wuxuu ku wanaagsanyahay, waxyaalaha uu ku xunyahay, cunada nooca ku haboon, xanuunada uu unugul yahay, …
Noolaha Alle uumay waxay leeyihiin dhiig, haddana kala duwan dhiigooda. Waxaa jira afar dhiig oo caalamka laga aqoonsan yahay in uu jiro, waxayna kala yihiin: A, B, O, and AB. Waxaa jira kuwa ka farcama afartaas qeybood ee dhiiggu ka kooban yahay. Waxyaalaha aan ka hadlayno ma ahan in 100% sax yihiin balse waa cilmibaaris la sameeyay, laguna sameeyay dad badan oo caalamka ku nool. Waxaan soo qaadanaynaa astaamaha lagu garto qofka leh dhiigga A, wuxuu ku wanaagsanyahay, waxyaalaha uu ku xunyahay, cunada nooca ku haboon, xanuunada uu unugul yahay, qaabka uu u seexdo IWM. Muxuu ku fiicanyahay ruuxa leh …
Qaadku waa nooc ka mid ah geedaha loo yaqaan “Catha Edulis Forks”. Waa geed gaaban oo caleemo cagaaran leh, oo noqda geed weyn caleemaha curdunka iyo curubyada. Geedka qaadka ayaa loo takhsiintaa in laga helo saameyn firfircoon ama marqaan. Geedkaan ayay aaminsanyihiin dadka cunaa in ay ka helaan firfircooni sidoo kalena ay isaga ilaashaan welwelka iyo fikirka badan. Balse sida ay uhaystaan ma ahan, waayo geedkaan waa geed daroogo ah, lana dagaalama waqtiga, caafimaadka, dhaqaalaha IWM. Geedka qaadka ayaa inta badan Soomaaliya ka soo gala labo waddan oo kala ah Itoobiya iyo Kenya. Itoobiya waxaa ka yimaada qaadka loo yaqaan …
Aqoontu waa fahamka barashada shay ama ashyaa badan, waxaana loo bartaa si aad wax uga ogaato arrin jirta ama cusub, si loo daraaseeyo walax. Aqoontu waa iftiinka Aadanaha waana halka ay Soomaalidu ka tiraahdo “Aqoon la’aani waa iftiin la’aan”. Aqoontu waxay salka ku haysaa in wax cusub adduunka lagu soo kordhiyo ama barashada wax horay ujiray ama cusboonaysiinta arrin horay ujirtay. Aqoonta waxaa lagu qeexaa wax aad baratay ama xirfad aqooneed aad leedahay ama aad baratay. Aqoontu waa isha keliya ee aad wax ku aragto, waana ilayska meel mugdi ah kuu bidhaansha si aad wax u aragto ama kugu haga …
Mowduucan waxaan uga faaloondoonaa Af-keena hooyo, doorka ay ka ciyaarikaraan dhallinyarada, waaridka iyo ilaalinta Af-ka si aan unoqono bulsho leh Af iyo dhaqan. Waddan walba waxa uu leeyahay dhaqan, diin, Af, Calan, waana astaanta lagu garan karo in uu yahay waddan jira. Haddii dalkaasu lahayn Af, ma noqon karo waddan, waana sababta aan uga hadlaayo mowduucaan si aan uga dheeraano Af-qalaad iyo ilaalinta magaca iyo sumcaddeena mustaqbal. Af-ku waa astaan uu leeyahay waddan, ugooniya, laga adeegsado, lagu hadlo. Waa Af ay bulsho kuwada xiriirto, isku fahanto, iskuna baaqaan kolka ay iswacayaan ama isku yeerayaan. Af-ka Soomaaliga waxa uu ka midyahay …
Dhinacyada bulsho laga horumarinkaro waxaa kamida kobaca dhaqaalaha dal uu leeyahay. Dunida maanta waxyaabaha layskula dagaalamo waa dhaqaale, waxaad maqashaa waddanbaa waddan kale cunaqabatayn saaray IWM. Wuxuu saarayaa cunaqabatayn dhaqaale, dalkaasoo dhana saamayn ba’an ayay ku yeelanaysaa. Dalkeena waa dal dihin oo khayraad ka buuxo laakiin maaha dal ay kunoolyihiin dad uqalma, caalamka waxaa jira waddamo aan lahayn wax khayraadah haddana dhaqaalohoodu uu sara kac sameeyo. Dalkayga hooyo waxaa lagu tiriyaah waddamada dunida ugu dhaqaalaha hooseeya. Waxaa loo baahan yahay inaynu dhaqaalaha dalka horumar ku samayno, si aynu dalkeena sharaftiisa iyo magaciisaba kor ugu soo qaadno. Haddaba, siday haweenku uga …